China Shopping Cart DG2035 inogadzira uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:DG-2035
Ukuru hwechigadzirwa: 90x35x55CM
Saizi yeBhegi: 54.5 × 32.5x22CM
Saizi Carton: 88x35x53CM
Bhegi zvinhu: polyester 600D PVC
Inotenga ngoro ine zvigaro, yakakwira mhando, isina kuremerwa neyakaipetwa furemu, inorema mushambadzi yekushambidzira ye600D oxford machira ebhegi, ane fashoni uye akawanda, zvakanaka mubatsiri muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Zvakawanda-zvinoshanda Zvinoshandiswa. Iishandise sengoro yekutenga, girosari, zvinoshandiswa, ngoro inodhinda, uye ingori imwe ngoro pamavhiri isina zvishoma zvinodiwa; Bvisa bhegi uye rinova risingaremi dolly rinogona kutakura.
Inotadza uye Inotakurika. Rinyorere pasi pasi nepakati kuitira compact chengetedzo painenge isiri kushandiswa; Chengetedza mumuti wemota yako, pasi pemubhedha, mune kabhodhi kana garage.
Inematanho manomwe ekuchengetedza, ayo anosanganisira chinwiwa akabata, pamberi pechikwama muhomwe, chemukati chikwama, kumashure muhomwe nezvimwe; Zvinhu zvako anoenda kwaunoenda.
Kunge pasina imwe ngoro ine Seat pamusika, iyo Trolley Dolly ine Seat ine padded foam chigaro cushion uye kumashure kutsigirwa kuitira kuti iwe unogona kuzorora kana iwe wakaneta.
Iyo Leisure Shopping Trolley ine Fold Down Seat inopa mushandisi tsigiro uye yekuchengetedza nzvimbo kana uchifamba, uye inopa nzvimbo yekuzorora kana zvichidikanwa. Iyo microfibre machira trolley bhegi yakakura muhukuru uye yakasimba zvakakwana kuti ibate uremu. Kana mushandisi achida imwe zororo pane yakasimba peta pasi chigaro chiri kuseri kweanofamba. Mucheka wakapfava une hushoma hushoma hwakavakirwa mukugadziridza kuve nechokwadi chekugara pakanaka. Zvese zviviri uye zvitatu zvine mavhiri eiyo Leisure Shopping Trolley ine Fold Down Seat zviripo.
Yepfuura: Shopping Cart DG1026 / DG1027
Yakakura Duty Shopping Cart
Inotakurika Shopping Cart
Shopping Cart Ne Dhiri Swivel Wheels
Shopping Cart neOversized Basket
Shopping Cart Nemavhiri
Diki Diki Dzekutengesa